Horjooge iyo Toban Maleeshiyo oo la socotay oo ka wada tirsan kooxda Argagaxisada Alshabaab ayaa lagu dilay Gobolka Shabeellaha Hoose. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Horjooge iyo Toban Maleeshiyo oo la socotay oo ka wada tirsan kooxda...
Horjooge iyo Toban Maleeshiyo oo la socotay oo ka wada tirsan kooxda Argagaxisada Alshabaab ayaa lagu dilay Gobolka Shabeellaha Hoose.
Kadib howlgal qorsheeysan oo ay ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab ka fuliyeen degmada Sablaale ee Gobolka Shabeelada hoose ayeey ku khaarajiyeen horjoogihii maleeshiyaadka al-shabaab u qaabilsanaa jubooyinka iyo toban maleeshiyaad ah oo lasocday.
Ciidanka kumaandooska ayaa lagu waramay in ay ka warhelern dhaqdhaqaaqa koox maleeshiyaad ah oo habeenimadii Sabtida soo gaaray hooy ku yiillay Sablaale,waxaana ciidamadaasi ay howlgal qorsheeysan ka fuliyeen gurigii ay ku jireen kooxdaasi,iyagoo halkaasi Ku wada toogtay horjoogaha iyo tobankii maleeshiyaad ahaa ee lasocday.
Horjoogahaasi la dilay ayaa lagu magacaabaa (Mucaad dheere) kaasi oo Al-shabaab u qaabilsanaa jubooyinka ama gobolada jubooyinka sida uu kusoo waramayo Wariyaha Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Shilaawe oo lasocday ciidanka howlglka ka fuliyay degmada Sablaale ee gobolka shabeelada hoose.
Ciidanka kumaandooska xoogga dalka ayaa kordhiyay howlgalada qorsheeysan ee lagu beegsanaayo horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab
Previous articleMusharixiinta Guddoonka Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta khudbadahooda jeedinaya.
Next articleShirka Banbaxa Golaha Wasiirrada oo furmay ayaa looga hadlayaa Arrimo Badan oo muhiim ah.+(SAWIRRO)+(MUUQAAL)